Fundamentos De SEO Do Semalt Ou Como Melhorar Suas Posições Hapana SERP
Apo bhizinesi remukati rinotora e-commerce, iyo inowanzoda kudiwa kukuru kukwezva vatengi vari munzvimbo. Bhizinesi rinobudirira renzvimbo rine maitiro ekutengeserana kwepaInternet uye kunze kwekune dzimwe nyika, izvo zvinounza zvikomborero zvakawanda kune hurongwa. Nokuda kweiyi nyaya, kushambadzira kwepaIndaneti kuburikidza nekutsvaga Search Engine Optimization (SEO) kunobatsira mukuita mawebsite panzvimbo yeSERPs, zvichiita kuti sangano rose ribatsire zvakasimba. Zvisinei, kutengeserana kwekambani yekutsvaga maitiro kunowedzera simba - variable voltage vape kits. Vashandi vanofanirwa kuchenjerera kuti zvisizvo zvinokonzerwa nezvikwangwani zvekutengeserana. Somuenzaniso, imwe nzira ingashanda ikozvino asi inobata kushanda gare gare.
Igor Gamanenko, the Semalt Mutevedzeri weMutevedzeri Mutengi, akatsanangura nzira dzakasiyana-siyana kutsvaga injini dzinoshandiswa pakuronga mawebsite:
Nharaunda ye SEO inoshambadzira kudhindwa kwema digital apo kuwanda kwekutsvaga kunzvimbo kune imwe nzvimbo nzvimbo. Sezvaunowedzera nzvimbo yako kuti uone pane zvakawanda zviri muIndaneti, zvakanaka kuti utarisire chokwadi chokuti webhusaiti yakanaka inofanira kusanganisira zvakakosha mazita mumusoro, meta tsanangudzo uye muviri wezvakagadzirwa.
Google Maps zvakare chimwe chinhu chinokosha chekuchengetedza nzvimbo yakanzi SEO. Mepu yeGoogle ine zvakanakisisa pakuti inobatsira webhusaiti yako kuti iite. Localized SEO inotarisa kuisanganisira yakakosha geographical uye nhamba yezvinhu zvinowanikwa apo inoshandisa nzvimbo yeShoko reShoko rinokosha rinodikanwa. Aya ndiwo mazwi anowanzofambisa motokari yose kumapeji ako ewebhu..
Kushandisa Automation SEO:
SEO zvikamu zvakatanga kuchinjwa kubvira kubvira pakatanga SEO. Kune mavara akasiyana-siyana ari paIndaneti ane zvinhu zvinogona kushandura SEO. Nokushongedza, bhizinesi rezvebhizimisi rinogona kuchengetedzwa nyore nyore pamwe nekubatanidza makero ekudhinda nevakawanda yekuongorora dhigirii nzira.
Kwose kambani inoda kubudirira nekutengeserana kwepaIndaneti inoda kuwedzera webhusaiti yavo yefoni. MunaJanuary gore rino, Google yakatanga kuzivisa kuti kubvuma kwepaiti pane zvigadzirwa zvefoni ndechimwe chezvinhu zvavanenge vachishandisa kuti vaone mawebsite. Somugumisiro, kuvandudza webhu yako yehutsva yekutsvaga kwefoni kunogona kuva inobatsira. Ne SEO yemo, serofoni inogona kusvika kune vanhu vakawanda vachishandisa mapurisa akaita sangano revanhu.
Google Bhizinesi Yangu:
Google peji rangu rebhizinesi rinobatsira mabhizinesi edzimba ane nzvimbo yewebsite pazvinjini. Kushandisa nhoroondo iyi, munhu anogona kushandisa mifananidzo yakakwirira kuti akurudzire zviri muiti yavo. Iko kambani inowanikwa paGoogle maps, kuwedzera mukana wekuva pakati pemigumisiro yakakwirira.
Chero bhizinesi rekuIndaneti rinoda kuonekwa paIndaneti mumajini ekutsvaga uye pamapuratifomu akadai sehuwandu hwemagariro evanhu. Digital marketing inowanikwa kune vashandisi vekombiyuta kuburikidza nehutanho hunoenderana nemusika wakakura uripo paIndaneti kune mabasa akawanda Nharaunda ye SEO inosanganisira kushandiswa kwehutachiona hwehutano pamwe chete nechinangwa chekutsvaga uye dzimwe nzira dzekutengesa. Apo zvinosvika kuSEO yega, kune mazano akawanda ayo munhu angashandisa uye kuwana zvizhinji zvezvibereko kubva kwavari. Nzvimbo yako yega yega campaign inofanira kubudirira kana ukashandisa mazano ari pamusoro apa nekuchenjera.